ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးသော ရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ် ၇ ဦးအထိရှိလာ - hotnewmyanmar.com
ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးသော ရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ် ၇ ဦးအထိရှိလာ
ရုရှားအဆင့်မြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးဖြစ်တဲ့ Lt. General Yakov Rezantsev ဟာ ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းက ခါဆွန်မြို့အနီးတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတယ်လို့ ယူကရိန်းစစ်ဘက်ကထုပ်ပြန်ပါတယ်။သူဟာ အမှတ်၄၉ တပ်ပေါင်းစုရဲ Commander ဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်အုပ်စုရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ သူဟာ ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာကျဆုံးတဲ့ ၇ ယောက်မြောက် အဆင့်မြင့်စစ်ဘက်အရာရှိ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါဟာ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေတဲ့ ရုရှားရှေ့တန်းစစ်သည်များအတွက် ထိုးနှက်ချက်တခုပါ။
သူ မကျဆုံးခင် လေးရက်လောက်က သူ့စစ်သည်များကို ဒီစစ်ပွဲဟာ နာရီအနည်းငယ်မျှနဲ့ ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာကို ယူကရိန်းစစ်ဖက်မှကြားဖြတ် အသံဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းမီဒီယာများရဲ့ ဖေါ်ပြချက်အရ သူဟာ ခါဆွန်မြို့က Chornobaika လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းက ကွပ်ကဲနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာကို ယူကရိန်းတို့မကြာခန တိုက်ခိုက်ရာနေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစခန်းမှာပဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အင်ဒရေ မော်ဗီချက် လဲကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားတိုဖက်ကတော့ ယူကရိန်းစစ်ပွဲ စတင်ကတည်းက ၎င်းတို့ဖက်မှ ဗိုလ်ချုပ်တဦးသာ ကျဆုံးကြောင်းကြေညာထားပေမဲ့ ကိဗ်ယက်နဲ့ အနောက်အုပ်စုများကတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ၇ ဦးအထိတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးထားတယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဒီ့အပြင် ရုရှားဖက်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့ ချေချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်က ဗိုလ်မှူးချုပ် မာဂိုမက် အူရှာယက်သေဆုံးမှုကိုလဲ ရုရှားကငြင်းဆိုပါတယ်။
ဒီလိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများကိုယ်တိုင် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကို ရောက်ရှိလာတာဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေတဲ့ ရုရှား ရှေ့တန်းစစ်သည်များကို စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုယ်တိုင် အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးခံရလို့လားဆိုတာ မသဲကွဲပါဘူး။
ရုရှားစစ်သည်များဟာလဲ မျှော်လင့်မထားတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ တွန်းလှန်ခုခံမှုတွေကြောင့် သေဆုံးမှုအရေအတွက် တိုးလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ဓါတ်ပါပျက်ပြားစပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားစစ်သားတွေအသုံးပြုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များဟာလဲ ယူကရိန်းအနေနဲ့ အလွယ်တကူ ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းနိုင်တာကြောင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများရဲ့တည်နေရာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ အတွင်းစည်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦက ယူကရိန်းဟာ ရုရှားရဲ့ အဆင်မြင့်အရာရှိများကိုပစ်မှတ်ထားထောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဝေါစထရိ ဂျာနယ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
သောကြာနေ့မှာပဲ အနောက်အုပ်စုတာဝန်ရှိသူများက ကာနယ်တယောက်ဟာ သူ့ရဲ့မအောင်မြင်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွင်း ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာမှာ သူ့တပ်သားများရဲ့ပစ်သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူကတော့ အမှတ် ၃၇ အမြှောက်တပ်ကတပ်မှူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာတပ်တွင်း ပြိုကွဲမှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျဆင်းမှုကို ဖေါ်ပြနေတာလို့လဲ ယူဆစရာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ ရုရှားခေါင်းဆောင်ပူတင်ကတော့ သူ့စစ်တပ်က လက်ဖတင်နင်ဂျင်နရယ်တစ်ဦးသာ ကျဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။စစ်သည်အရေအတွက် ကျဆုံမှုကတော့ ၁၃၅၁ ပဲရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါကြောင်း။
ရှရှား ကျဆုံးသူများစာရင်းကိုပါ လက်လှမ်းမီသ‌မျှ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
( ၁ ) Lt Gen. Yakov Rezantsev
( ၂ ) Andrei Mordvichev ( Commander of 8 th combine army southern district.)
( ၃ ) Maj.Gen. Oleg Mityaev.
( ၄ ) Maj. Gen. Andrei Kolesnikov.
( ၅ ) Maj. Gen Vitaly Gerasimov.
( ၆ ) Maj Gen Andrey Sukhovetsky.
Previous Article ရုရှားစစ်တပ်ကို အခက်တွေ့စေတဲ့ ယူကရိန်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့များအကြောင်း
Next Article ကပ္ပလီကျွန်းများမှ ထူးခြားသော မြောက်ပိုင်းကင်းစောင့် ကျွန်းသစ်တော